FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PLOTT HOUND - ALIKA
Ity no Duke the Plott Hound amin'ny 12 volana, milanja 75 pounds!
Ny Plott Hound dia alika antonony sy matanjaka ary hozatra. Ny karan-doha dia somary fisaka miaraka amin'ny hoditra milamina tsara. Ny molotra dia somary lava miaraka amina manidina izay mahamendrika azy. Mainty ny molotra sy ny orona. Ny maso malaza dia volontsôkôlà na hazelà miaraka amin'ny sisin'ny maso mainty. Ny sofina mihantona dia mivelatra ary lava ny halavany. Ny rambony lava dia apetraka eo ambanin'ilay topline. Ny tongony mahery dia misy rantsan-tongotra. Ny palitao dia fohy, malama, tsara ary marevaka. Na dia mpitovo aza ny ankamaroan'ny palitao Plott, indraindray mety misy palitao roa sosona. Ny lokon'ny palitao dia misy aloky ny brindle, mainty matevina, borosy misy lasely mainty, mainty misy volo vita amin'ny brindle ary hoditr'omby tsy fahita firy. Mety misy fotsy manodidina ny tratra sy ny tongony.
Ity karazana ity dia manao namana tsara. Mendri-pitokisana sy manan-tsaina, ny Plott Hound dia mailaka mianatra, haingana amin'ny fitiavana ary tsara amin'ny ankizy. Ny toetra maha-olona azy dia azo antoka fa tsy hita miharihary eo amin'ilay lalana. Manana fahasahiana lehibe ity mpihaza sy scenthound lalao lehibe ity. Tapa-kevitra, be herim-po ary mirehareha izy, hilalao akoho amam-bera 500-ponina na lambo feno bibidia tezitra. Ny Plott dia manana feo maranitra sy avo lenta, tsy toy ny fidradradradrana lalina mahazatra an'ireo coonhounds hafa. hifanerasera ity karazany ity amin'ny mbola kely ary aza hadino ny mampianatra azy fankatoavana tsotra toy ny mandeha amin'ny tadiny . Mikasa ny hanao teti-dratsy drool sy slobber . Mila a mafy orina, fa milamina , mpandray fitokisana, tsy miovaova. Anarana canine amin'ny fifandraisan'olombelona tena ilaina.
Hahavony: 20 - 25 santimetatra (51 - 63 cm)
Lanja: 40 - 75 pounds (18 - 34 kg)
Ny tsipika sasany ateraka dia mamokatra alika lehibe kokoa.
Ny Plott Hound dia heverina ho mafy indrindra amin'ny coonhounds. Mihinana sakafo be dia be haingana izy io, ka mora tohina amin'ny fivontosan'ny vavony sy ny fivadibadihan'ny ain'ny vavony. Aza mampiasa an'io alika io aorian'ny sakafo lehibe.
chesapeake bay labrador retriever mix
Ny Plott Hound dia tsy soso-kevitra amin'ny fiainana an-trano. Afaka miaina sy matory any ivelany izy io, raha manana fialofana mety. Ity karazana ity dia tsy manana fahatsapana an-dalambe mihitsy ary tokony hotehirizina amin'ny faritra azo antoka satria manana fironana hirenireny.
Ny Plott Hound dia mila fanatanjahan-tena be dia be, izay misy isan'andro, lava, haingana MANDEHANA na jogging. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ity amboa miakanjo tsara sy mahia ity dia manana fiaretana sy tanjaka hiasa tontolo andro ary hatramin'ny alina. Ny Plott Hound dia tokony hanana vintana handosirana malalaka, saingy teraka mpihaza voajanahary ary manana fironana handositra sy hihaza raha tsy voatazona amin'ny faritra voafefy tsara nefa manao fanazaran-tena
Ny palitao fohy an'ny Plott Hound dia mora taovolony. Manosotra sy miborosy tsindraindray hanalana ilay volo maty. Zahao matetika ny sofina sao hadio izy ireo ary tsy misy aretina. Aorian'ny fihazana dia tokony hozahana ny hoho rovitra, lamba misaratsaraka amin'ny tongotr'izy ireo, sofina rovitra, ary parasy sy kongona.
Ny Plott Hound no hany tokana amerikana tsy manana razambe anglisy. Tamin'ny 1750 Jonathan Plott sy ny rahalahiny dia nandao an'i Alemana nankany Amerika. Nentin'izy ireo niaraka tamin'ny Hound Hanoverian dimy izy ireo. Ny rahalahin'i Jonathan Plott dia maty nandritra ny dia saingy nanorim-ponenana tany North Carolina i Jonathan. Tany izy no nitaiza fianakaviana ary nitaiza ny alikany. Ny fifangaroan'ny Bloodhounds sy Curs dia voalaza fa nahitana ny tahiry tany am-boalohany. Nandritra ny 200 taona manaraka, ny alika dia nateraky ny razamben'ny fianakavian'i Plott ary nantsoina hoe hounds an'ny Plott. Niasa tamin'ny fihazana orsa ireo alika ireo ary Raccoon ao amin'ny Appalachian, Blue Ridge ary Great Smoky Mountains any atsinanan'i Etazonia. Mahalana ny fianakavian'i Plott no mametraka ny alika eny an-tsena ka tsy dia fahita any ivelan'ny faritra atsimon'i Etazonia izy ireo. Ny alika dia nekena voalohany tamin'ny 1946 tamin'ny United Kennel Club. Ny teti-dratsy dia mafy orina ary manana toetra voajanahary mihaza. Tena mandaitra izy ireo amin'ny fikarohana coyote, amboadia ary bibikely. Ny karazany dia novolavolaina tamim-pitandremana mba ho matanjaka sy maharitra. Afaka nanao namana mpianakavy tsara izy ireo saingy tsy dia tazonina toy izany, satria ny ankamaroan'ny tompony dia nahazo ny alika hihaza. Tamin'ny 2006 dia neken'ny AKC tamin'ny fomba ofisialy ho toy ny 'Plott' ary naseho ho alika fampisehoana ankehitriny, saingy misy maro izay mbola mihaza sy mamboly azy ireo ho toy ny alika mpihaza.
alika manga boribory orona manga
SnoopDogg the Plott Hound eo amin'ny 7 taona eo ho eo— 'Natao hiaraka izahay sy Snoop. Vao avy namoy a Rhodesian Ridgeback ary tsy nanana alika. Olona mpitsangatsangana foana aho. Snoop dia nijoro teo afovoan'ny làlambe roa amin'ny afovoan-tany NM. Tsy nanana vozon'akanjo izy ary nijoro teo ambonin'ny fatin'ny alika hafa. Satria hita miharihary fa feno hadalana izy, tsy haiko raha ny alika maty no sakaizany na sakafo atoandro. Ilay alika hafa kosa voadonan'ny fiara. Misy faritra ny fiara manerana ny arabe ary fiara sy kamio no nibolisatra nefa tsy niadana akory. Tsy maintsy nanandrana nisambotra azy aho. Nandany fotoana vitsivitsy satria natahotra ny ho faty izy, saingy azoko ihany ny tanako. Sarona buckshot izy ary hoditra sy taolana. Noheveriko fa fotsy volondavenona izy satria ny rambony nafatotra mafy ao ambanin'ny kibony ka ny bikany dia toa greyhound . Ny lohany, na dia coonhound daholo aza. Vitako ny nitondra azy tao amin'ny fipetrahan'ny kamio ary nitondra azy nody. Mbola tsy tao anaty fiara mihitsy izy talohan'izay ary nihovotrovotra ary nisy nanafika izy. Avy eo dia miharihary fa mbola tsy tao an-trano koa izy taloha. Nanomboka vaky trano avy hatrany aho. Nanao fahadisoana iray izy ary tsy nanao fahadisoana mihitsy. '
SnoopDogg the Plott Hound eo amin'ny 7 taona eo ho eo— 'Ny ampitson'io dia nentiko tany amin'ny mpitsabo biby izy. Nilaza ny mpitsabo biby fa Plott Hound izy ary nieritreritra fa tokony ho 4 na 5 volana izy. Natahotra ho faty izy! Nilaza ilay mpitsabo biby fa ratsy ny fo ary tokony hanao izany aho hifanerasera izy ary fahano izy mba hanome lanja azy. Rehefa niverina tamin'ny lanjany ara-dalàna izy dia nandamina ny andiana fitifirana ary neutered izy. Nentiko n'aiza n'aiza. Nanatevin-daharana azy teo am-poko izy. Rehefa afaka kelikely, tsy mila fehikibo akory aho raha tsy rehefa tao an-tanàna izahay. Raha tsy izany dia heveriko fa natahotra be izy very ahy ka tsy afaka nampihontsona azy aho raha tiako izany. Elaela ary mbola mandeha ny fiaraha-monina na dia efa enin-taona aza. Mbola tsy mahazo aina amin'ny lehilahy izy, na dia hanafana aza izy amin'ny farany. Azo antoka fa karazan'olona io no atahorany indrindra, ka ataoko fa nifandray tamin'ny buckshot nandrakofana azy io. Mifanaraka amin'ny saka izy ary alika hafa ary tia ankizy. Izy dia tsara kokoa momba mpiambina loharano (sakafo) ary mbola tsy hilalao kilalao. Mino aho fa izy no nesorina tamin'ireo iray tampo aminy ary ny reniny aloha be ary tsy nahazo ilay fampiofanana tena zava-dehibe loatra ka hianaran'ny zaza alika kely amin'ny sakaizany. '
dane lehibe sy saint bernard mix
SnoopDogg the Plott Hound eo amin'ny 7 taona eo ho eo— 'Ny olany lehibe indrindra dia ny feon'ny poa-basy na fiara miverina mitifitra. Mbola manana fanafihana mikorontana izy amin'izay tokony handehanany mitady toerana mangina maizina ahafahany miafina mandra-pialany voly. Nandeha teo ambanin'ny fandriako izy ary nilentika, nanozongozona ary nandohalika. Nanandrana niditra tao ambanin'ny fandriana niaraka taminy aho ary nilaza taminy fa tsy maninona ... ooops! Nijery an'i Cesar Milan mandrakizay aho ary sendra nahatratra fizarana iray izay natrehiny tamim-pahatahorana ary alika mikorontana . Tamin'ny fandehanana tao ambanin'ny fandriana niaraka tamin'i Snoop mba hanandrana hampitony azy, dia izaho no izy mamahana ny fihetsika ... nahasarika ny sainy hanao zavatra toy izany izy ... ka najanoko daholo ny saina tamin'izany fotoana izany ary avelako izy hiatrika izany. Rehefa nahazo aina izy nivoaka avy tao amin'ny toerana niafenany, dia nomeko azy ny sain'ny maro ... Mbola mitranga izany, saingy tsy mila miditra ao ambanin'ny farafarako intsony izy. Ankehitriny dia afaka mandeha tsara eo am-pandriana izy ary avy eo manara-maso amiko rehefa tapitra ilay fizarana. Maniry aho fa afaka manampy azy hialana amin'ity tahotra ity, saingy efa ela be tamin'ity fotoana ity no tsy isalasalako raha ho foana tanteraka izany. Ankafiziny ny mandeha amin'ny zaridainan'alika. Mihaona sy miarahaba ny rehetra izy ary misoroka alika tsy miovaova - izy irery. Mpihomehy izy ary mampihomehy ny olona rehetra eo amin'ny valan-javaboary. Fantatry ny rehetra ny anarany. Tena niaro ahy izy, mbola tia milalao toy ny alika kely ary misaotra an 'Andriamanitra isan'andro aho fa sendra teny amin'ny làlambe tao NM aho tamin'io andro io.'
Augie the Plott Hound amin'ny faha-3 1/2 taona— 'Vao teraka teo amin'ny fiainako i Augie. Izy dia mamy, marani-tsaina ary tia mikimpy eo ambony sezalava! Tiany ny mihazakazaka amin'ny lanezy ary mitaingina fiara. '
Guszilla aka Gus the Plott Hound amin'ny 1 taona, milanja 110 pounds!
Guszilla the Plott Hound amin'ny faha-3 taonany, milanja 137 pounds! 'Izy dia goavambe malefaka, sariaka ary mpakafy toy izany.'
Ity i Loki, Plott Hound 14 volana navotana tamin'ny SPCA.
Sary natolotry ny Southern Pride Plotts
Hijery ohatra hafa momba ny Plott Hound
Plott Hound sary 1
Boston terrier sy ny schnauzer Mix
retriever volamena St Bernard Mix